डान्सबारहरूको यस्तो हर्कत ! एउटा जुस खाएको ८ हजार रुपैया ? « News24 : Premium News Channel
डान्सबारहरूको यस्तो हर्कत ! एउटा जुस खाएको ८ हजार रुपैया ?
प्रकाशित मिति : Nov 06, 2018
काठमाडौं, २० कात्तिक । गत साता नयाँ बसपार्कको नमस्ते डान्सबारले एउटा जुस खाएको विल कसरी ८ हजार लिन्छ ? भन्ने देखाएका थियाँै । यति मात्रै होइन रेष्टुरेण्ट सञ्चालकले अवैध रेष्टुरेन्टबाटै देह व्यापार पनि गराउने गरेको देखायांै । जहाँ सञ्चालकले प्रहरीलाई समेत सेटिङ मिलाउनु पर्छ भनेका थिए ।
अहिले नमस्ते डान्सबार शिल छ, भने यसका सञ्चालक प्रहरी हिरासतमा छन् । तर यो घटना सेलाउन नपाउँदै बालाजुमा रहेको मिड नाइट लज एण्ड डान्सबारले समेत यस्तै हर्कत गरेको छ । हामीलाई सर्वसाधरणको गुनासो आएपछि हाम्रो टिमले मिड नाइट लन्ज ऐण्ड डान्सबारमा स्टीङ गरेको थियो ।
यो रेष्टुरेण्टमा पनि यसरी नै ग्राहक फकाइन्छ र बारमा पु¥याइन्छ । भित्र जाने वित्तिकै केहि युवती आएर सँगै बस्छन् र उनिहरुले नै आँफै अडर गर्न थाल्छन् । हाम्रा टिभि जर्नलिष्ट शालिकराम पुडासैनीले एउटा जुस माग्दा उनिहरुले रेड लेबल लगाएतका मदिरा अर्डर गर्छन् ।
र अन्तमा एउटा जुस खाएका हाम्रा टिभि जर्नलिष्टलाई ८ हजारको विल थमाइन्छ । यस अघिकै घटना दोहोरिए पछि प्रहरीसँग समन्वय गरी हामी रेष्टुरेण्ट तर्फ लाग्छौँ ।
रेष्टुरेण्टका कर्मचारीका रुपमा सँगै बसेकी युवतीले अर्डर गरेको सबै रक्सी र खानाको विल हाम्रा टिभि जर्नालिष्टको नाममा जोडिएको रहेछ ।
र ति युवतीलाई सँगै बस्न र अर्डर गर्न होटल सञ्चालकले नै लगाएका रहेछन् । उनिहरुले सबै ग्राहकलाई यसरी नै ठग्ने गरेका रहेछन् । अहिले रेष्टुरेण्ट बन्द छ भने सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु अहिले प्रहरी थुनामा छन् ।
१५० बेवारिसे लासको सद्गत गरिसकेका विनयजंग भन्छन्- सहकारीकाे ऋण १८ लाख पुगिसक्याे, तर अभियान रोकिन्न
क्षमताभन्दा पाँच गुणा धेरै, कोठ बाहिर त्रिपाल टाँगेर सुत्छन् कैदीबन्दी
३३ किलो सुन काण्डमा फैसाला गर्ने ५ जना न्यायाधीश कारवाहीमा , स्विस बैंकमा क–कसको पैसा ?(भिडियो)
रोजगारीका लागि जापान लग्ने भन्दै २६ जनालाई ठगेर एजेन्ट फरार
ठगी गर्ने तीन पेट्रोल पम्प कारवाहीमा